PSJTV | लेखापालका चार श्रीमती, खातामा भेटियो पाँच करोड!
लेखापालका चार श्रीमती, खातामा भेटियो पाँच करोड!
काठमाडौं: यातायात व्यवस्था कार्यालयका कोसीका लेखापाल सुरेश अधिकारीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी विरुद्ध पाँच करोड १० लाख ३३ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अधिकारीले चारवटी श्रीमतीको नाममा सम्पत्ति राखेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। उनका चार श्रीमतीमा दुर्गा अधिकारी, दीपा श्रेष्ठ, सुस्मिता अधिकारी र सोममाया श्रेष्ठ छन्।
सबैका नाममा अकुत सम्पत्ति राखेको पाइएकाले उनीहरुविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए। अधिकारीले सासू पुष्पकुमारी निरौला र मामा नाताका बलराम शर्मासमेतको नाममा पनि सम्पत्ति राखेकाले उनीहरुविरुद्धसमेत आयोगले मुद्दा दायर गरेको नयाँपत्रिकामा खवर छ ।